Dilal ka dhacay Galgaduud iyo Hiiraan
Wararka ka imaanaya magaalada Baledweyne ayaa sheegaya in Askar ka tirsan ciidamada dowladda federalka ee Soomaaliya ayaa sheegaya inay magaalada Beledweyne lagu dilay laba qof oo rayid ah.
Cali Cabdi Mahad-Alla (Cali Dhuux) oo ah taliyaha ciidamada booliska Beledweyne ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in la qabtay mid ka mid ah askarta dilka geysatay, iyadoo askariga kalana lagu raad joogo.
Dilka laba qof oo kala dambeeyay ayay wararku sheegayaan inay ku yimaadeen aano qabiil, waxaana sida dadka deegaanka ay sheegayaan qofka dambe ee la dilay loogu aargudayay qofka kale ee naftiisa la dhaafiyay.
Dhinaca kale Laba qof oo rayid ah ayaa lagu soo warramayaa in lagu dilay inta u dhaxeysa degmooyinka Xeraale iyo Ballanbale ee gobolka Galgaduud.
Mid ka mid ah labada qof ee la dilay oo ka mid ahaa darawallada kaxeeya gaadiidka Qaadka ayay wararku sheegayaan in loogu aar-guday wiil ku sugnaa ceel biyaha laga cabbo oo ku yaalla inta u dhaxaysa Xeraale iyo Ballanbale.
Xiisad ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhalatay dilalka, iyadoo maamulka labada degmo ay dhexdhexaadin billaabeen.
Guddoomiyaha degmada Xeraale ee dolwadda Soomaaliya, Bashiir Dhagabadan ayaa sheegay inay ku guuleysteen in ay kala dhex galaan dadka dega labada degmo oo ay xiisadda u dhaxeyso, si ooga baaqsado dilal kale oo loo geysto dad kale oo aan waxba galabsan.
Hareeri Xasan Barre oo ka mid ah maamulka degmada Ballanbale ayaa isaguna sheegay inay xaaladdu deggan tahay.